ग्लोबल « NBC KHABAR
काठमाडौं । विमान चालक, आकर्षक पेसाका रुपमा रहने गरेको छ । धेरैका लागि पाइलट बन्नु सहज हुँदैन । तर यो जागिर बाहिरबाट देख्दा जति ग्लामरस देखिन्छ, पाइलट स्वयंका लागि भने
के मलाइका र अर्जुन कपूरले विहे गर्दैछन् ? सुरु भयो यस्तो चर्चा !
एजेन्सी । मलाइका आरोडा–अर्जुन कपूरको अफेयरको चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आइरहेको छ । यो जोडीले अहिलेसम्म आफ्नो अफेयरको कुरालाई लिएर पब्लिकल्ली खुलासा गरेका छैनन् । तर यो जोडीको रोमान्टिक ट्युनिङ
पाँच तारे होटल भन्दा कम छैन अष्ट्रियाको जेल !
काठमाडौं । जेल भन्ने वित्तिकै सबैलाई कालोकोठा, चिसो भुँइ र कडा सुरक्षाको याद आउँछ । तर, विश्वमा यस्तो पनि देश छ जहाँको जेल शान्दार पाँच तारे होटल भन्दा कम छैन
भारत र पाकिस्तानको युद्धले दुई मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित
एजेन्सी । भारत र पाकिस्तानबीच युद्धको सम्भावना बढेपछि दुवै मुलुकको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु प्रभावित भएका छन् । खासगरी प्रतक्ष रुपमा शेयर बजारमा असर परेको छ । बजारमा तिब्र उतारचढाव देखिएको छ
भारत–पाक घम्साघम्सी : आकाश अतिक्रमण गर्दै आक्रमण गर्ने प्रयास
काठमाडौं । पुलवामा आक्रमणपछि भारत–पाकिस्तानबीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ । दुबै मुलुकले एक अर्काको सीमाभित्र पसेर आक्रमण गर्न थालेपछि स्थिति जटिल बन्दै गएको छ । भारतले पाकिस्तानको सीमामा छिरेर आतंकवादीलाई
पर्यटनका लागि चर्चित भएपनि एयरपोर्ट नभएका मुलुक
काठमाडौं । विश्वको दोस्रो मुलुकमा जानका लागि सबैभन्दा पहिला पासपोर्ट हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसपछि भिसाको प्रक्रिया पूरा गरी आफूले चाहेको स्थानमा जान सकिन्छ । तर विश्वका केही यस्ता पनि
किमको रेलबाट भियतनाम यात्रा, चीनमा पोखियो आक्रोश, भियतनाम दङ्ग
काठमाडौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसंगको वार्ताको पूर्व सन्ध्यामा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन ४ हजार किलोमिटर यात्रा तय गरेर भियतनाम पुगेका छन् । पहिलो चरणमा सिंगापुरमा भएको ऐतिहासिक
भारतको बम हमलापछि पाकिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयमा आकस्मिक बैठक
काठमाडौं । मंगलवार बिहान भारतीय वायुसेनाका विमानले नियन्त्रण रेखा उल्लंघन गर्दै पाकिस्तानी क्षेत्रमा बम खसालेपछि स्थिती गम्भिर बनेको छ । पाकिस्तानका परराष्ट्रमन्त्री मेहमूद कुरैशीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा आकस्मिक परामर्श बैठक बोलाएका
बादलको बीचबाट चल्छ अर्जेन्टिनामा रेल
काठमाडौं । विश्वका धेरै रेलहरु पुल वा कुनै सुरुङबाट चल्ने गरेको समाचार धेरैले सुन्ने गरेका छन् । यद्यपि तपाइँले कहिल्यै बादलको बीचबाट चल्ने रेलबारे सुन्नुभएको छ ? अजेन्र्टिनाको एक रेल
ग्रिफेन नामको कुकुरले ग-यो स्नातक !
घरपालुवा जनावरको शैक्षिक योग्यता ! सुन्दा अपत्यारिलो लाग्छ । अमेरिकाको न्यूर्योकमा ग्रिफेन नाम गरेको कुकुरलाई एक विश्वविद्यालयले डिप्लोमाको उपाधि दिएको छ । न्यूयोर्कको क्लार्कसन युनिभर्सिटीमा पढ्ने शारीरिक रुपमा अशक्त २५